Site Selection | Reef Resilience
Ny fifantenana toerana dia afaka mamaritra raha mety ny famerenana amin'ny laoniny ny tetik'asa fitantanana araka ny tokony ho izy ary inona no fomba tsara indrindra mifanaraka amin'ny tetikasa. Ny tranonkala fikarohana dia afaka manampy amin'ny fanombanana ny haben'ny fambolena voajanahary sy hitadiavana toerana mety hampitombo ny fahombiazan'ny fambolena coral, ary farany manampy anao hamaritra ny fepetran'ny tetikasa.
Ireto ambany ireto misy antony telo hanampy anao hamantatra hoe aiza no misy (raha misy) faritra: 1) ny tantaran'ny ecologique of a site; 2) ny toetra biolojika sy ny vatan'ny tranonkala iray; ary 3) ny fepetra azo hamerenana amin'ny laoniny.
Afaka mamaritra ny fiarahamonin'ny haran-koditra teo aloha ve ianao na ny "tranonkala referanda"?
Mifidiana tranokala misy porofo milaza fa naverina indray ny karazan-katsaka
Amin'ny toe-javatra sasany dia mety ho simba ny tranonkalanao ary tsy azo atao ny mamaritra ny fiarahamonin'ny haran-dranomasina voajanahary ao amin'ny tranokala, izay tokony haverina indray ny karazan-karazan-javamaniry, na ny mety ho ny fahasamihafan'ny vatohara. Amin'ny tranga toy izany, tokony hamantatra ny tranonkala na "community references" eo akaikin'ny toerana mety haverina amin'ny laoniny.
Ny fikarakarana tranonkala iray dia afaka manampy amin'ny famaritana raha niova ny toe-piainana ara-tontolo iainana ao amin'io tranokala io ka tsy hivoatra intsony ny karazam-borona na ny fiaraha-monina.
Raha toa ka tsy misy ny tranonkala na tranokala eo akaiky eo, mety ho marika fa mety tsy hahomby amin'ny toerany ny famerenana amin'ny laoniny any amin'io faritra io, ary tokony hiantso ny mety hitrangan'ny famerenana amin'ny laoniny noho ny fahasarotana mety hitrangan'ny korontana.
Inona avy ireo tranonkala mety amin'ny famerenana amin'ny laoniny?
Raha ny antony voalohany amin'ny famerenana amin'ny laoniny dia ny hanatsarana ny mponina amin'ny karazam-biby iray manokana, dia ny fisafidianana indostrialy izay manolotra tontolo iray tsara ho an'ity mponina ity dia manan-danja.
Raha ny antony voalohany amin'ny famerenana amin'ny laoniny dia ny hampivoarana ny tolotra ara-tontolo iainana, toy ny jono, dia mety ho sarobidy kokoa ny toe-piainana hafa, toerana, na fomba hafa, ary hisy fiantraikany izay toerana mety indrindra.
Ny tetikasa mikendry ny hamerenana ny haran-dranomasina hanatsarana ny fiarovana ny morontsiraka dia mety hampiasa ny Atlas ny harena an-dranomasina, izay mampiseho faritra izay mety hisy fiantraikany bebe kokoa amin'ny fiarovana ny morontsiraka.
Ho an'ny hetsika miteraka, ny tompon'andraikitra dia tokony hikaroka tranokala izay manana fepetra izay manohana ireo vondrom-piarahamonina ho an'ny fahasalamana ara-pahasalamana ary mety ho marefo kokoa amin'ny hetsika mahavariana toy ny hafanan'ny ranomasina. Alohan'ny hanombohana ny famerenana amin'ny laoniny dia azo atao ny mampihatra fampiharana "fitadiavam-baovao" mba hampitahana ny toerana mety sy ny kalitaon'ny tontolo iainana na ny tontolo iainana. Ireo endrik'izao manaraka izao dia matetika ampiasaina mba hanombanana ny faharetan'ny tranonkala:
Toerana be mponina - Ny vatoharan-tany misy ny karazan-katsaka izay efa namboarina amin'izao fotoana izao na ny fitantanana ara-tantara dia mety ho mpifaninana tsara ho an'ny toerana misy vatohara. Na izany aza dia tokony hesorina ny antony mahatonga ny fatiantoka sy ny fatiantoka amin'io karazana io alohan'ny hanombohan'ny famerenana amin'ny laoniny. Ny fanadihadiana dia tokony hatao amin'ny vatohara efa misy mba hamaritana ny haavon'ny fiatrehana ny tontolo iainana, ny fandranitana, ny fivalozana, ny aretina ary ny ala honko alohan'ny hitrangany.
Fiandohan'ny zanatany ray aman-dreny - Raha raisina ho toy ny zanatany fanomezana ny haran-kisoa, dia mety hanampy ny mifanaraka amin'ny fepetra momba ny tontolo iainan'ny zanadranon'ny ray aman-dreny voajanahary na ny toe-java-misy eo amin'ny sehatry ny fambolena mba hampivelatra ny sisa tavela.
Site depth - Ny halaliny izay hanamboarana ny vatohara dia tokony hitovy amin'ny halalin'ny karazan-karazan-javamaniry voajanahary. Izany dia azo faritana amin'ny fitadiavana ny halalin'ny zanabola mpamatsy vola na amin'ny fanadihadiana ny zanatan-jazakely amin'ny karazan-karakaina any amin'ny tranokala hafa.
Karazana ambany - Tokony hialana ireo faritra misy rambo-potaka na fitaovana, toy ny fasika maivana, fasika matevina ary algoma mitandahatra izay mamatotra ny sediment.
Ny kalitaon'ny rano - Tokony hanana toetra tsara tsara ny tranokala, toy ny faharetan'ny fahazavana tsara sy ny halakin'ny sedimenta sy ny sakafo. Tokony hialana ny toerana manodidina ny toerana fitahirizana rano.
Mpitsikilo biolojika - Ireo faritra izay ahitana haran-dranomasina avo be (toy ny siny na kintana an-dranomasina), ny faritany tsy misy fitiavan-tena amin'ny vatohara, na ny fifaninanana avo lenta amin'ny fifaninanana corals sy ny mpifaninana hafa bentika (ohatra: alga, sponges, gorgonians, coral fire).
Site accessibility - zava-dehibe ny hahalalana mora foana ny tranokala ary afaka mipetraka rehefa avy nipongatra mba ahafahana manara-maso.
Toeram-piarovana - Toeram-pambolena dia tokony ho any amin'ny faritra misy fihenan'ny asa ataon'ny olombelona izay mety hiteraka fahavoazana amin'ny fambolena. Ny fitantanana ny famolavolana ao amin'ny MPA na any amin'ireo faritra izay tsy dia misy mpizaha-tany na mpanjono dia mety hampihena ny fahasimbana mety sy hampitombo ny fivelomana.
Toeram-piarovana sy fahasalamana eo amin'ny habakabaka - Ny fanadihadiana momba ny vatohara dia tokony atao mba hahazoana antoka ny fahasalamana avo lenta amin'ny tranokala. Ny natiora momba ny natiora dia namolavola ireo mari-pahaizana momba ny fitsaboana mba hametrahana ny fahasalamana ara-tontolo iainana ankapobeny amin'ny toerana mety hitrandraka amin'ny alalan'ny fanadihadiana ireo singa maro hafa. Ity fanadihadiana ity dia miorina amin'ny dikan-teny novaina amin'ny AGRRA. Ny fotodrafitr'asa rehetra ho an'ny tranonkala iray dia tafakambana, ary ny tranonkala izay ambony indrindra dia lasibatra ho an'ny ezaka fampiroboroboana. Hatramin'izao, ny sisa velona amin'ny fambolena dia efa voarakitra ao amin'ny tranonkala izay manana taha ambony ambany kokoa noho io rafitra io.
Ireo fepetra fanamarinana ny natiora momba ny natiora ho an'ny fikajiana ny fitrandrahana. Credit: Kemit Amon-Lewis, TNC.
Ny kalitaon'ny rano Fahafantarana momba ny faritra Tsy misy olana Hamaky ny tohiny ... amin'ny ankapobeny rehefa misy hetsika orana Zava-fantatra sy loharanom-baovao mahaliana
Flow Fahafantarana momba ny faritra Mihazakazaka mandingana Mazotoa mikoriana Lagoonal; indraindray
Acroporids Misaotra betsaka > Kolonely 50 25-50 zanatany
Coral assemblage Measured% mandrakotra sy fahasamihafana > 20% fandrakofana sy> 50% ny haran-dranomasina > 20% coverage na> 50% ny haran-dranomasina
diadema Misaotra betsaka > 50 25-50
Damselfish Notsongaina ny marika famandrihana isaky ny colony 5-15% > 15%
Macroalgae Measured% coverage 1-5% 6-10% > 10%
Corallivores Misaotra betsaka 0 1-15 > 15
fahasalamana Nosoratana ny% bleaching and paling 0% 1-20% > 20%
Ny habetsan'ny famindrana toerana, karazan-karazan-tsakafo, ary loharanon'ny famindrana?
Mba hamaritana raha azo atao ny tranonkala iray ho an'ny famerenana amin'ny laoniny, dia misy tale iray ahitana fitadiavana ny zava-misy amin'ny fijerena ireto hevitra manaraka ireto:
Ny habetsaky ny faritra mitaky fanamboarana: Raha ampitahaina amin'ny faritra famerenana amin'ny laoniny ny fatran'ny fambolena, dia farito ny faritra manontolo hitrandrahana. Diniho ny vidiny ary azonao atao ny manatratra ny sahan-kevitra sy ny haben'ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny mba hahomby.
Karazana karazana mety amin'ny fambolena: Ny ankamaroan'ny fandaharanasa fanarenana dia miara-miasa amin'ny karazam-borona (toy ny acroporids sy pocilloporids) satria mitombo haingana izy ireo ary miteraka toerana azo antoka ho an'ny trondro kely sy tsy fahampian-tsakafo. Na izany aza, mety ho mora kokoa amin'ny fahamendrehana sy ny fiakaran'ny rivo-mahery ireo haran-dranomasina ireo. Noho izany dia tena manan-danja tokoa ny karazana vato lehibe satria manorina ny haran-dranomasina izy ireo ary matetika dia mandefitra kokoa ny adin-tsaoka noho ny vatoharan-java-manitra. Ny karazan-karazan-karazan-karazana sy karazana marobe dia tokony hodinihina mba hamerenana amin'ny laoniny ny risika.
Loharano ao an-toerana momba ny vatohara ho an'ny garderie sy ny fambolena: Ny manodidina ny tranokalan-tserasera, ny toerana misy ny zana-ketsa, ary ny toeram-pivarotana fanorenana ho an'ny fanamboarana dia hevi-dehibe. Ilainao ihany koa ny mamantatra raha ilaina ny famokarana vatohara iray raha oharina amin'ny fikajiana tsotra fotsiny ny "corals of opportunity" (sombintsombin'ny natiora amin'ny haran-dranomasina izay manana vahaolana mahomby). Ny tranonkala loharano dia tokony mihoatra ny 30-60 minitra miala sambo mba hampihenana ny fihenjanana sy ny fahaverezan'ny sombin-tsakafo. Misy fanazavana fanampiny momba izany ao amin'ny Fitaovana fampielezan-kevitra an-tsokosoko page.
Coral Reef Restoration amin'ny Internet (jereo ny Lesona 1: Fampidirana amin'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny drafitrasa momba ny drafitrasa)
Fanaraha-maso ny vondron'anton'ireo karazan-trondro voajanahary ho endriky ny harena voajanahary voajanahary - Torohevitra mahomby ho an'ny mpitantana ny haran-dranomasina any amin'ny faritra Azia-Pasifika
Atlas ny Harena An-dranomasina - Sarintanin'ny Ocean Ecosystem Services